काठमाडौं -मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले विद्यार्थीका लागि नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय निजि तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (प्याब्सन) सँगको सहकार्यमा कम्पनीले विद्यार्थीको अनलाइन कक्षा तथा सिकाईका लागि आकर्षक मासिक योजना.....
काठमाडौं -माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा आफूले सोचे जस्तो नतिजा नआएपछि दुई किशोरीले आत्महत्या गरेकी छन् । अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्ककी सदिक्षा पौडेल र झापा बुधबारेकी सलिना ढकालले आत्महत्या गरेकी हुन् । सदिक्षाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् भने सलिनाले गरी आत्महत्या गरेकी हुन् । अर्घाखाँची जिल्ला.....
आमा छोराले नै पास गरे SEE परीक्षा, आमाको अनमि पढ्ने चाहना, छोराको साइन्स !
भक्तपुर निवासी ३४ वर्षीया गंगामाया थापामगर र उनका १६ वर्षीय छोरा रोशन एसइई उत्तीर्ण गरेको खुसी साटासाट गर्दै । आस्था महिला विद्यालय भक्तपुरकी विद्यार्थी गंगामायाले २.३७ र एसओएस हर्मन माइनर स्कुल सानोठिमीका विद्यार्थी रोशनले ३.७ जिपिए ल्याएका छन् । आमा अनमि पढ्न चाहन्छिन् भने छोरा साइन्स । एसईईमा.....
SEE मा शान्ता चौधरीले ल्याइन् बी ग्रेड, करिश्माको बि प्लस ! (यसरी हेर्नुहोस नतिजा)
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा यो वर्ष उच्च नतिजा 'ए प्लस' ल्याउनेको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा बढेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। बिहीवार प्रकाशित नतिजा अनुसार कुल १७ हजार पाँच सय ८० जना विद्यार्थी 'ए प्लस' श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका बताइएको छ। यो सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा तीन हजारले बढी हो। यो वर्ष पहिलो.....
दाङ -रोल्पाको एक विद्यालयमा शिशिक्षाको कुटाइबाट चौध जना विद्यार्थी घाइते भएका छन् । दाङसँग जोडिएको रुन्टीगढी गाउँपालिका ८ स्थित भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनको कुटाइबाट घाइते चौध विद्यार्थी घाइते भएका हुन् । कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने विद्यार्थी घाइते भएका छन् । उनीहरुमध्ये पाँच जनाको.....
पर्सा- जिल्लाको कालिकानाई गाउपालिका वडा न-४ मा रहेको राष्ट्रिय आधारभुत बिद्यालयमा अचम्मको समस्या देखियो । नसुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो कुरा साचो हो । जुन यी कलिला विद्यार्थी हरुले भोग्दै आईरहेका छन । स्कुलको छेउमा मसानघाट छ । जहाँ विद्यार्थीहरु भुत भन्दै भाग्ने गर्छन । त्यसैले त्यहा समय समयमा बिदा भैरहन्छ.....
अब बिद्यालयमा नै २ रुपैयाँको सिक्का प्रयोग गरी सेनिटरी न्याप्किन प्याड निकाल्न सकिने
स्कुल र कलेज अध्ययनरत छात्रालाई महिनावारीका बेला निकै अप्ठ्यारो र समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। धेरैले नियमित पढाइ नै छुटाउँछन् । यहाँसम्म कि ४–५ दिन घरमै बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसकी बीआईसीटीमा अध्ययनरत छात्रा अस्मिता अधिकारी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘स्कुल होस् वा क्याम्पसमा.....
पूर्व मन्त्रि ढकालद्वारा बिद्यालय भबन हस्तान्तरण
गोर्खा, ३० चैत्र - नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्रि एकनाथ ढकालको पहलमा निर्माण सम्पन्न भयको भीमसेन गाउपालिका -८, गोर्खा स्थित श्री भवानी प्राथमिक बिद्यालयको ४ कोठे पक्कि भवन एक कार्यक्रमका बीच अध्यक्ष ढकालले बिद्यालयलार्इ हस्तान्तरण गरेका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले भुकम्पको.....
हिमाल एकेडेमीमा मुस्कान सहितको सिकाई शुरु
काठमाडौं , २८ चैत्र – शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन देशब्यापी रुपमा विभिन्न प्रयास र प्रकृया अवलम्बन भईरहेकोमा बालुवाटार स्थित हिमाल एकेडेमीले सर्वसुलभ शुल्कमा मुस्कान सहितको सिकाई यसै शैक्षिक वर्ष २०७६ वाट अवलम्बन गर्ने भएको छ । विभिन्न विद्यालयमा हुने गरेका वालवालिका विरुद्धका शारिरीक, मानसिक.....